မိန်းမလှလေးတွေက သာမန်ရုပ်ရည်ရှိသူတွေကို ရွေးချယ်တတ်သည့် အကြောင်းရင်းများ – Gentleman Magazine
မိန်းမလှလေးတွေက သာမန်ရုပ်ရည်ရှိသူတွေကို ရွေးချယ်တတ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဘာကြောင့်များ ရူပါသိပ်မလန်းတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ တွဲဖြစ်ကြတာလဲ ?
ဒီကိစ္စက မိန်းကလေးတွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်သက်သက်ဆိုပေမယ့် အမျိုးသားအများစုက အဖြေရှာမရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေက ချမ်းသာလို့လား၊ သူမကိုပျော်အောင်ထားနိုင်လို့လား၊ အခြားစွမ်းဆောင်ရည်များကောင်းလို့လား၊ စသဖြင့် အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ခေါင်းရှုပ်မနေပါနဲ့တော့။ ဒီမေးခွန်းအတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူတို့အတွက် စိတ်လုံခြုံမှုရှိလို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ စွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိအမျိုးသားတွေနဲ့ တွဲတဲ့အခါမှာ မိန်းမလှလေးတွေအတွက် စိတ်မလုံမလဲဖြစ်မှု ပိုမိုသက်သာစေပါတယ်။
၂။ သူမက ပိုကြည့်ကောင်းသူဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီအချက်က နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးမှာ သူမကိုအမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။
၃။ သူမရဲ့အလှအပကို သတ်မှတ်ချက် မတူလို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရုပ်ရည်ထက်အရေးကြီးတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့က အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ပိုကြည့်တတ်ပါတယ်။
၄။ မနာလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိလို့ပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရုပ်ရည်ကြည့်ကောင်းတာက သင့်ကိုနေရာတိုင်းမှာ ထင်ပေါ်နေစေပါတယ်။ ဒီတော့ သူမအတွက် စိုးရိမ်စရာများပါတယ်။ သာမန်ရုပ်ရည်ပဲရှိသူကို ရွေးချယ်ထားင်တော့ တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ရှုပ်မှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
၅။ အသာရလိုစိတ်ရှိလို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေက သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးမှာ အထက်စီးကနေခွင့်ရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ သာမန်ရုပ်ရည်နဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ တွဲတဲ့အခါမှာ ဒီခံစားချက်မျိုးရရှိနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အလေးပေး၊ ဂရုစိုက်ခံရလို့ပါ။
သာမန်ရုပ်ရည်ပဲရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ မိန်းမလှလေးတွေနဲ့ လက်တွဲခွင့်ရတဲ့အခါမှာ လိုတာထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သဲသဲလှုပ် ပူပင်ဂရုစိုက်တတ်တာမျိုးကိုပဲ အမျိုးသမီးတွေက လိုချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
သူမရဲ့လက်တွဲဖော်က သာမန်ရုပ်ရည်ပဲရှိသူဖြစ်တာကြောင့် တခြားမိန်းကလေးတွေက မြူဆွယ်မှာကို၊ ဖောက်ပြန်မှကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့ ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးမှာ အနှောင့်အယှက်မရှိ ရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
မိနျးမလှလေးတှကေ သာမနျရုပျရညျရှိသူတှကေို ရှေးခယျြတတျသညျ့ အကွောငျးရငျးမြား
လှပပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ဘာကွောငျ့မြား ရူပါသိပျမလနျးတဲ့အမြိုးသားတှနေဲ့ တှဲဖွဈကွတာလဲ ?
ဒီကိစ်စက မိနျးကလေးတှရေဲ့အဆုံးအဖွတျသကျသကျဆိုပမေယျ့ အမြိုးသားအမြားစုက အဖွရှောမရတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလူတှကေ ခမျြးသာလို့လား၊ သူမကိုပြျောအောငျထားနိုငျလို့လား၊ အခွားစှမျးဆောငျရညျမြားကောငျးလို့လား၊ စသဖွငျ့ အတှေးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ခေါငျးရှုပျမနပေါနဲ့တော့။ ဒီမေးခှနျးအတှကျ ဖွဈနိုငျတဲ့ဖွရှေငျးခကျြ(၇)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ သူတို့အတှကျ စိတျလုံခွုံမှုရှိလို့ပါ။ ဟုတျပါတယျ။ စှဲဆောငျမှုသိပျမရှိအမြိုးသားတှနေဲ့ တှဲတဲ့အခါမှာ မိနျးမလှလေးတှအေတှကျ စိတျမလုံမလဲဖွဈမှု ပိုမိုသကျသာစပေါတယျ။
၂။ သူမက ပိုကွညျ့ကောငျးသူဖွဈနလေို့ပါ။ ဒီအခကျြက နှဈဦးသားဆကျဆံရေးမှာ သူမကိုအမွဲတမျး စိတျခမျြးသာစပေါတယျ။
၃။ သူမရဲ့အလှအပကို သတျမှတျခကျြ မတူလို့ပါ။ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ရုပျရညျထကျအရေးကွီးတာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ သူတို့က အမြိုးသားတဈယောကျရဲ့ စိတျထားနဲ့ အကငျြ့စရိုကျကို ပိုကွညျ့တတျပါတယျ။
၄။ မနာလိုဖွဈစရာအကွောငျးမရှိလို့ပါ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ရုပျရညျကွညျ့ကောငျးတာက သငျ့ကိုနရောတိုငျးမှာ ထငျပျေါနစေပေါတယျ။ ဒီတော့ သူမအတှကျ စိုးရိမျစရာမြားပါတယျ။ သာမနျရုပျရညျပဲရှိသူကို ရှေးခယျြထားငျတော့ တခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ ရှုပျမှာကို စိတျပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
၅။ အသာရလိုစိတျရှိလို့ပါ။ အမြိုးသမီးတှကေ သမီးရညျးစားဆကျဆံရေးမှာ အထကျစီးကနခှေငျ့ရတာကို သဘောကကြွပါတယျ။ သာမနျရုပျရညျနဲ့အမြိုးသားတှနေဲ့ တှဲတဲ့အခါမှာ ဒီခံစားခကျြမြိုးရရှိနိုငျလို့ ဖွဈပါတယျ။
၆။ အလေးပေး၊ ဂရုစိုကျခံရလို့ပါ။
သာမနျရုပျရညျပဲရှိတဲ့ အမြိုးသားတှဟော မိနျးမလှလေးတှနေဲ့ လကျတှဲခှငျ့ရတဲ့အခါမှာ လိုတာထကျပိုပွီး ဂရုစိုကျတတျကွပါတယျ။ ဒီလို သဲသဲလှုပျ ပူပငျဂရုစိုကျတတျတာမြိုးကိုပဲ အမြိုးသမီးတှကေ လိုခငျြကွတာဖွဈပါတယျ။
၇။ ရရှေညျလကျတှဲနိုငျမယျလို့ ယူဆလို့ပါ။
သူမရဲ့လကျတှဲဖျောက သာမနျရုပျရညျပဲရှိသူဖွဈတာကွောငျ့ တခွားမိနျးကလေးတှကေ မွူဆှယျမှာကို၊ ဖောကျပွနျမှကို စိုးရိမျစရာမလိုဘူးလို့ ယုံကွညျတတျကွပါတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ နှဈဦးသားဆကျဆံရေးမှာ အနှောငျ့အယှကျမရှိ ရရှေညျလကျတှဲသှားနိုငျမယျလို့ ထငျကွပါတယျ။
Previous: မိန်းကလေးများအကြိုက် Perfect Date ဖြစ်စေဖို့
Next: မိန်းမတွေ ဘာလိုချင်သလဲ